UZuma umangaze uZweli Mkhize emcimbini we-ANC | News24
UZuma umangaze uZweli Mkhize emcimbini we-ANC
Isithombe: Makhosandile ZuluUMengameli uMnu. Jacob Zuma utheleke kungalindelekile emcimbini wokubungaza ukusungulwa kwe-ANC obubanjwe KwaDukuza ngeSonto, ngomhla ka-15 kuMasingana (January).
UMENGAMELI Jacob Zuma umangaze lowo okubikwa ukuthi ugaqele isikhundla sokuba yiSekela likaMengameli we-ANC, uZweli Mkhize, ngesikhathi etheleka kungalindelekile emcimbini lapho uMkhize ebezothola khona ithuba lokuthi azethule njengoba kubhekwe engqungqutheleni yokukhetha ubuholi be-ANC, kubika iCity Press.
UMkhize – nokumanje onguMgcinimafa Jikelele we-ANC – bekunguyena isikhulu ebesijutshwe ukuba siyothula inkulumo kulo mgubho wesifundazwe iKwaZulu Natali wokubungaza ukusungulwa kwe-ANC, kodwa inkulumo kaSihlalo wesifundazwe, uSihle Zikalala, iye yaphazanyiswa ukufika obekungalindelekile kukaZuma.
UMkhize, nokubikwa ukuthi ugaqele isikhundla sokuba yisekela likaMengameli engqungqutheleni yokukhetha ubuholi be-ANC ngoDisemba, ubebonakala ukuthi umangele kanti futhi uthwale kanzima ezama ukuzihlela ngesikhathi ethula inkulumo.
Lo mcimbi ububonakala njengethuba elihle kuMkhize ukuthi ukulungele kangakanani ukuba uMengameli.
Ngaphambilini, uZuma noMkhize babesondelene, kodwa manje kubikwa ukuthi sebesezinhlangothini ezehlukene njengoba uya ngokushuba umbango wabazokhethelwa ezikhundleni ezingu-6 eziphezulu ku-ANC.
IKwaZulu Natali ingesinye sezifundazwe ezibalulekile njengoba inesibalo esiphezulu sezithunywa kwingqungquthela kanti ngaphezu kwalokho iyikhaya kuMkhize kanye noZuma.